Uganda Na-achịkwa Ahịa Anụmanụ Na-achịkwa Elektrọnik, Na-echekwa Njem Nleta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Uganda Na-achịkwa Ahịa Anụmanụ Na-achịkwa Elektrọnik, Na-echekwa Njem Nleta
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Uganda na -achịkwa ahia anụ ọhịa
Ministri njem nlegharị anya, anụ ọhịa na ihe ochie nke Uganda ewepụtala taa, Julaị 29, 2021, usoro izizi elektrọnik iji hazie azụmaahịa anụ ọhịa yana ngwaahịa anụ ọhịa na mba ahụ.
N'okpuru isiokwu bụ "Ịkwado Iwu Azụmaahịa Anụmanụ Na -adigide," usoro inye ikike elektrọnik bụ ebumnuche ịchịkwa azụmaahịa iwu na anụ ọhịa ma gbochie azụmaahịa ihe atụ na -ezighi ezi.
A na-eme nke a site na ikikere eletriki na ikikere maka ahia (mbubata, mbupụ na mbupụ) na ụdị.
Edepụtara ụdị nlele ndị a na Mgbakọ maka azụmaahịa mba ofesi na anụ ọhịa na ahịhịa ọhịa (CITES).
Uganda ugbu a ghọrọ mba izizi na East Africa na 8th na kọntinent Africa imepụta usoro ikike CITES elektrọnik.
Ndị Amerịka akwadowo mmepe nke sistemụ ịnabata elektrọnik n'okpuru mmemme United States Agency for International Development (USAID)/Uganda Combating Wildlife Crime (CWC) site na Wildlife Conservation Society (WCS) na mmekorita ya na Ministry of Tourism. Anụ ọhịa na ihe mgbe ochie.
Dr. Barirega Akankwasah, PhD, Kọmishọna na -ahụ maka nchekwa anụ ọhịa na onye na -ahụ maka Director nke ministri nke njem nlegharị anya anụ ọhịa na ihe ochie (MTWA) na -ahazi mwepụta ahụ, n'ụdị ngwakọ na ntanetị. Ndị bịara ya bụ Mịnịsta na -ahụ maka njem nlegharị anya n'ọhịa anụ ọhịa na ihe ochie, Honorable Tom Butime, onye duziri mwepụta ahụ; odeakwụkwọ ya na -adịgide adịgide, Doreen Katusiime; Onye nnọchi anya United States na Uganda, onye nnọchi anya Natalie E. Brown; na onye isi ndị nnọchi anya Europe na Uganda, Onye nnochite anya Attilio Pacifici. Haruko Okusu, onye isi oru ngo a, nwere ike ịnọchite anya odeakwụkwọ CITES ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ.
Mgbe ọ na -ekwu okwu na mmemme ahụ, onye nnochite anya Brown mere ka ọ pụta ìhè ọrụ ndị USAID na -akwado iji buso ahịa anụ ọhịa iwu na -akwadoghị gụnyere Canine Unit na Karuma Wildlife Reserve, ebe a na -azụ nkịta ma kwadebe maka igbochi ngwaahịa anụ ọhịa na mpaghara.
Onye nnochite anya Pacifici katọrọ mbibi nke oke ọhịa gụnyere Bugoma na shuga azụmahịa nke Hoima Sugar Limited na Forest Zoka na -eto na ndị nnọchi anya EU gara na Nọvemba 2020 wee depụta mbibi ahụ site na onyonyo satịlaịtị. Ọhịa Bugoma bụ ebe obibi maka Mangabey Uganda na -enweghị nsogbu, na oke ọhịa Zoka bụ ebe obibi Flying Squirrel. Osisi abụọ a anọwo na etiti mgbasa ozi na -aga n'ihu megide ụgbọ ala nke ndị na -apụnara mmadụ ala na ihe ndị rụrụ arụ n'ọfịs dị elu.
Haruko Okusu, odeakwụkwọ CITES kwuru na “… Ikikere bụ otu n'ime ngwa ọrụ maka nleba anya azụmaahịa na ụdị CITES edepụtara yana ọ dị mkpa ịghọta oke azụmaahịa CITES. Usoro Uganda na -achọ idobe usoro ọ bụla nke ụlọnga. "
Dr. Barirega nyere nzụlite na CITES na mbinye aka nke Uganda na-esote gụnyere nkọwa nke Mgbakwụnye I, II, na III na ndepụta ndepụta Mgbakọ ahụ nyere ọkwa dị iche iche ma ọ bụ ụdị nchebe pụọ na nrigbu.
O kwuru, dị ka CITES Management Authority, a na-enye ndị ọrụ njem nlegharị anya, anụ ọhịa na ihe ochie nke Uganda iwu ịhụ na ịzụ ahịa na ndepụta CITES na ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ na-adigide na iwu. A na -eme nke a n'etiti ụzọ ndị ọzọ site na ịnye ikike CITES na nkwenye nke ikike anụ ọhịa Uganda maka anụ ọhịa; Ministry of Agriculture, Ụlọ ọrụ anụmanụ na azụ maka azụ azụ; na Mịnịstrị mmiri na gburugburu ebe obibi maka osisi sitere n'ọhịa. Ọ bụ ọrụ ndị sayensị sayensị CITES ịhụ na azụmaahịa, ọkachasị anụmanụ ma ọ bụ ụdị ihe ọkụkụ, anaghị emebi ndụ ha nke ụdị anụ ọhịa.
Ruo ugbu a, Uganda dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ na-eji sistemụ asambodo na ntinye akwụkwọ ikike, nke nwere ike ịdaba n'ịgba akwụna, na-ewe oge iji hazie na nyochaa, na ọbịbịa COVID-19, ngagharị akwụkwọ nwere ike. bụrụ ihe egwu maka mbufe ọrịa. Site na sistemụ eletrọnịkị, isi okwu CITES dị iche iche na ndị ọrụ mmanye iwu nwere ike nyochaa ikike ozugbo wee kesaa ozi ozugbo banyere azụmaahịa anụ ọhịa. Nke a ga -egbochi ịzụ ahịa anụ ọhịa na -ezighi ezi nke na -eyi ndụ egwu nke ụfọdụ ụdị anụ ọhịa kachasị ewu ewu dị ka enyí, si otú a na -emebi ego njem ndị Uganda na nchekwa mba.
Joward Baluku, onye na -ahụ maka anụ ọhịa na Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, gosipụtara sistemụ na ntanetị na -egosi ka mmadụ ga -esi mee ya. banye nzere ha site na njikọ na webụsaịtị Ministry of Tourism Wildlife and Antiquities nke na -ewe onye anamachọihe site na usoro ndebanye aha tupu akwado ha ma gbakwaa ya ume.
United States Agency for International Development (USAID)/Uganda Combatating Wildlife Crime (CWC) bụ ọrụ afọ ise (Mee 5, 13-Mee 2020, 12) nke Wildlife Conservation Society (WCS) tinyere ndị otu ndị mmekọ. gụnyere African Wildlife Foundation (AWF), Natural Resource Conservation Network (NRCN), na Royal United Services Institute (RUSI). Ebumnuche nke ọrụ a bụ iji belata mpụ anụ ọhịa na Uganda site na iwusi ike nke ndị na -ahụ maka CWC ịchọpụta, igbochi na ikpe mpụ mpụ anụ ọhịa site na imekọ ihe ọnụ na ndị ọrụ nchekwa na ndị mmanye iwu, USAID na -etinye ndị mmekọ, ụlọ ọrụ mpaghara, na obodo ndị bi n'akụkụ. gaa na mpaghara echekwara.
Nkwekọrịta maka azụmaahịa mba ofesi na ụdị anụ ọhịa na ahịhịa ahịhịa (CITES) bịanyere aka n'akwụkwọ na Machị 3, 1973, wee banye n'ike na July 1, 1975. Mgbakọ ahụ metụtara azụmahịa mba ofesi na ụdị nke ụdị ndị ahọpụtara maka ikike site na sistemụ ikike. . Uganda, ndị sonyere na mgbakọ ahụ kemgbe Ọktoba 16, 1991, ahọpụtala Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities dị ka CITES Management Authority iji nye sistemụ ikikere yana ịhazi mmejuputa CITES na Uganda. Uganda akpọpụtala ndị na -ahụ maka anụ ọhịa Uganda; Ozi mmiri na gburugburu ebe obibi; na Mịnịstrị na -ahụ maka ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ anụmanụ na azụ azụ ga -abụ CITES Ndị ọka mmụta sayensị maka anụ ọhịa, ahịhịa ọhịa, na azụ ịchọ mma n'otu n'otu iji nye ndụmọdụ sayensị banyere mmetụta azụmaahịa na -echekwa ụdị anụ ọhịa.